Wikipedia:Mombamomba - Wikipedia
1 Wikipedia amin'ny ankapobeny, ary ny Wikipedia amn'ny teny malagsy
2 Ny tetikasa Wikimedia
3 Mandray anjara amin'i Wikipedia
Wikipedia amin'ny ankapobeny, ary ny Wikipedia amn'ny teny malagsy
Wikipedia dia marika napetraky ny fikambanana amerikanina Wikimedia Foundation (WMF). Izy io dia manan-tanjona ny hanangona ny fahaizan'ny olona manerana izao tontolo izao ary mizarazara azy araka ny lisansa hahafahana mizarazara azy am-pahalalahana: ny lisansa Creative Commons fanomezana ny lisitra manontolon'ireo mpamorona ilay votoatiny notsongaina ary fizarana azy amin'ny lisansa mitovy ho an'ny lahatsoratra vao nitranga vao haingana ary ny lisansa GFDL (GNU Free Documentation License) ho an'ireo lahatsoratra izay nitranga talohan'ny nampiharana ny lisansa CC-by-SA.
I Wikipedia dia tetikasa iray an'i Wikimedia Foundation izay manan-tanjona ny hanangona ny fahaizan'ny olombelon'izao tontolo izao amin'ny teny malagasy.
Eto amin'i Wikipedia, azon'ny tsirairay atao ny manova, mamorona ny fampahalalana am-pahalalahana. Azy zon'ny tsirairay mpitsidika ny manova ary manatsara ny votoatiny ato amin'i Wikipedia.
Ny Wikipedia dia avy amin'ny fiteny hawaianina wiki izay midika maika ary pedia izay avy amin'ny teny anglisy Encyclopedia izay teny azo dikaina "raki-pahalalana". Ny fotokevitry ny sehatra mampiasa mpanangom-botoatiny (web software) wiki dia fahafahana manova ary mamorona votoatiny amin'ny alalan'ny mpitety tranonkala.
Ny isan'ny fiteny manana ny wikipedia-ny manokana dia 270 (tsy isaina ireo Wikipedia izay nakatona noho ny tsifisiana fikambanana maharitra). Ny Wikipedia amin'ny teny malagasy amin'izao fotoana izay ahitana lahatsoratra 85 018. Ny isan'ireo mpikambana nisoratra anarana teto dia 18 108. Samihafa mazava ho azy ny fandrosoan'ny Wiki tsirairay : misy ireo Wiki amin'ny teny lehibe (teny eoropeanina izay teny ofisialin'ny Firenena Mikambana), ary misy ireo Wiki amin'ny fitenim-paritry ny firenena be fiteny. Ny isa manontolon'ny mpandray anjara mavitrika (mpikambana nisoratra anarana izay nanova indray farafahakeliny eo amina wiki iray) eo amin'i Wikipedia dia eo amin'ny 1,5 tapitrisa eo ho eo isam-bolana.
Ny tetikasa Wikimedia
Ny fikambanana WIkimedia dia fikambanana tsy manan-tanjona ny hanangombola izay iharan'ny 501(c)(3) ny kaodin-ketra (code fiscal) an'i Etazonia. Izy io no mampiantrano ireo tetikasa manam-botoatiny malalalaka toa i Wikipedia. Ka noho izy mpampiantranon'ny tetikasa Wikimedia dia tsy manana zo fanontana na inona na inona izy eo amin'ny votoatin'i Wikipedia.
Azonao atao ny manao fanomezana an'ny tetikasa Wikimedia amin'ny alalan'ny rohy Fanomezana eo amin'ny sidebar.
Mandray anjara amin'i Wikipedia
Na iza na iza dia afaka mandray anjara amin'i Wikipedia, amin'ny alalan'ny fanindriana ny ongler Hanova ao aminà lahatsoratra. Alohan'ny mandray anjara dia tsara vakiana ny fitsipika mifehy ny fanoratana lahatsoratra. Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny famoronana kaonty. Tsara ihany koa ny mahalala fa rehefa mandray anjara eto amin'i Wikipedia dia ilaina mahalala fomba sy manana fijery tsy miandany, izany hoe manaja ny fomba fijery rehetra, ary manampy fampahalalana avy amin'ny zava-misy fa tsy hevitry ny tena.
↑ Teny anglisy : Creative Commons Attribution Share-Alike
Hita tao amin'ny "https://mg.bywiki.com/w/index.php?title=Wikipedia:Mombamomba&oldid=815433"
Voaova farany tamin'ny 12 Mey 2018 amin'ny 10:22 ity pejy ity.